Saturday November 03, 2018 - 19:26:14 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Wararka ka imaanaya wadanka Mareykanka ayaa sheegaya in wasaaradda difaaca wadankaasi ay kumaanaan ciidamo ah u dirtay xuduuda uu mareykanku la wadaago wadanka Mexico si ay uga hor tagaan Kolonyo dad tahriibayaal ah oo kusoo wajahaan xuduuda koofuree
Wararka ka imaanaya wadanka Mareykanka ayaa sheegaya in wasaaradda difaaca wadankaasi ay kumaanaan ciidamo ah u dirtay xuduuda uu mareykanku la wadaago wadanka Mexico si ay uga hor tagaan Kolonyo dad tahriibayaal ah oo kusoo wajahaan xuduuda koofureed ee mareykanka, kuwaas oo kakala yimid wadamada Selvador, Guatamala iyo Hunduras si ay dalkan usoo gaaraan.
Taliyaha ciidanka qeybta woqooyi ee dalka mareykanka Jeneral Teernis J Oshnisi ayaa shir jaraaid oo uu qabtay ku sheegay in pantegon-ka mareykanka uu amar ku siiyey in ciidan gaaraya ilaa 5 Kun oo askari uu u diro xuduuda ay la wadaagaan wadanka Mexico, isagoo intaas ku daray in qaraarkan uusan aheyn kama dambeys, ayna suurta gal tahay in tirada ciidanka lasii kordhiyo maalmaha soo socda.
Tallaabadan ayaa imaanayso xilli madaxweynaha dalka mareykanka Donald trump uu horraantii isbuucan ku hanjabay in ay si adag kaga hortagi doonaan Kolonyada Tahriibayaasha ah ee ka kooban kumanaanka qof ee kayimid Americada dhex in ay lugta soo galiyaan dalkiisa, waxa uuna sheegay in ciidanka military-ga ay diyaar u yihiin in ay dadkaasi is hor taagaan.
Ciidanka ilaalada xuduudaha ee wadanka Mareykanka ayaa sidoo kale lagusoo warramayaa in ay xadka Mexico geeyeen kudhawaad Kun Askari oo kale si ay militaryga uga caawiyaan joojinta Kolonyada kusoo wajahadan halkaasi.
Afhayeennad u hadashay Hey’adda Unicef ayaa sheegtay in qoysas iyo carruur badan oo kolonyadan la socda ay wadamadoodi ugasoo carareen, dhibaatada ay ku hayaan kooxaha ka ganacsada mukhadaraadka, tuugada dhaca iyo kufsiga halkaas ka geysato, faqriga, handadaada joogtada ah.
Adeegyadii waxbarashada iyo ganacsigii oo gaabis xoog leh uu ku jiro, suurta galna aysan aheyn in dib loogu celiyo dariiqi dheeraa ee mudada bilaha ah ay kusoo rafaadayeen, waxa ayna ku baaqday in arinkan si degdeg ah wax looga qabto.
Waxa ay tiri waxaa jiro carruur fara badan oo xaalado caafimaad daro ay ku heysato dariiqyada, kuwaas oo aan heysan wax ay cunaan iyo biyo nadiif ah ay cabaan, sidoo kalena aan heysan gabaad ay ka galaan kuleylka daran ee kajiro dhulka saxaraha ah ee Mexico, dib u celintoodana ay sababi karto Dhibaato adag iyo geeri ku timaada carruurta iyo dumarka taagta daran ee kolonyadan la socda.
Horey ayay dowlada mareykanka go’aan adag uga qaadatay dadka sida sharci darrada ah kusoo gala wadankeeda ee k a imaanaya dhanka Mexico, waxayna horey u meel marisay in carruurta iyo ehelladooda lakala geeyo, mar hadii lagu qabto iyagoo kasoo talaabaya xuduuda labada dal, talaabadaas oo dad badan ay si adag uga hor yimideen balse Donald trump uu ku adkeystay.